Guddi matalayey gobolka Shabeellaha Dhexe oo la kulmay wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Guddi matalayey gobolka Shabeellaha Dhexe oo la kulmay wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya
Mareeg.com: Guddi ka matalayey deegaannada gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka koobnaa Siyaasiyiint, Waxgaradka, aqoonyahannada ayaa maanta Muqdisho kula shiray wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Soomaaliya, C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa).
Guddiga Waxgaradka deegaanka Shabeellaha Dhexe ay sheegay in sababta ay ugu yimaadeen Wasiirka ay tahay inay warbixin ka siiyaan dadaalo ay waxgaradka deegaankaasi wadeen in muddo ah oo ku aadan sidii dadka deegaanka ay aayahooda uga tashan lahaayeen oo maamul Goboleedka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan uu u noqon lahaa mid dadka deegaanka ay ka wada qeybgalaan.
Guddigan ayaa u sheegay wasiirka inay diyaarinayaan qorshihii Gobolka Banaadir iyo maqaamka caasimada Muqdisho, ayna ka codsadeen Wasiirka in talada ay marka hore ka timaado dadka deegaanka kadibna ay u gudubto Dowladda Federaalka heerarkeeda kala duwan, ka hor inta aan Baarlamaanka ka hadlin maqaamka Muqdisho.
Waxgaradka ayaa sheegay inay doonayaan talada iyo qorshaha gaaraya Baarlamaanka ay noqoto mid hoos ka soo bilaabata oo dadka deegaanka ay soo lafo gureen, kadibna ay Dowladda la tashiyo la sameyso dadka nidaamka waddamada caalamka ay isticmaalaan.
Cabdiraxman Cumar Cismaan (Eng. Yarisow) oo ka mid ah Guddiga deegaannada Sh/Dhexe iyo Banaadir ayaa u mahadceliyey Wasiirka Arrimaha Gudaha, isla markaana ka codsaday in Wasiirka uu tallooyinka loo jeediyey oo ah maslaxadda shacabka iyo tan Dowladda Federaalka uu tixgelin gaar ah siiyo.
Eng. Yarisow ayaa sheegay in Guddiga ay u caddeeyeen Dowladda Federaalka inay diyaar u yihiin inay Dowladda Federaalka kala shaqeeyaan dhismaha Maamul Goboleedka Sh/Dhexe iyo Hiiraan, sidoo kalena ay dhowaan soo gudbin doonaan qorshihii maqaamka Muqdisho iyo sidii Gobolka Banaadir uu u noqon lahaa Dowlad Goboleed.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka C/raxmaan Odowaa ayaa soo dhoweeyey Guddiga waxgaradka ugana mahadceliyey booqashadooda iyo tallooyinka dhaxalgalka ah oo ay soo jeediyeen.
Wasiirka ayaa sheegay in Dowladda Federaalka ay siyaasadeedu tahay in dadka deegaanka la siiyo fursado ay aayahooda uga tashtaan.